YEYINTNGE(CANADA): Friday, March 21
အိမ်ဖော်ကို ရက်စက်စွာနှိပ်စက်သည့် အိမ်ရှင် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရ
နော်နိုရင်း 21 March 2014
အိမ်ဖော်အမျိုးသမီးကို ရက်စက်စွာနှိပ်စက်တဲ့အိမ်ရှင်ကို ရဲစခန်းက ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး နေပါတယ်။
အိမ်ဖော်အမျိုးသမီး မသီတာဝင်းကို ရေနွေးပူလောင်းတာအပြင် မီးပူနဲ့ထိုးပြီး ရိုက်နှက် နှိပ်စက်တဲ့ အိမ်ရှင်ဒေါ်စီစိလျ (ခ) ဒေါ်ခါးခါးကို ရန်ကုန်တိုင်း ကမာရွက်မြို့နယ်ရဲစခန်းက မတ်လ ၂၀ ရက် ညနေပိုင်းမှာ သွားရောက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပြီလို့ ကမာရွတ်ရဲစခန်းက အမှုစစ် အရာရှိ ဒုရဲအုပ် ဟန်ထွန်းအောင်က ပြောပါတယ်။
“မနေ့ညနေပိုင်းက ဖမ်းပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ ကျနော်တို့ စစ်ဆေးတုန်းပါပဲ။ ဒါက ရမန်ပေးလို့မရတဲ့အတွက် ရဲစခန်းမှာ ချုပ်နောင်ပြီး စစ်ဆေးတုန်းပေါ့။”
ဒေါ်စီစိလျကို အိမ်ဖော် မသီတာဝင်းကနေပြီး ရဲစခန်းမှာ တိုင်ကြားအမှုဖွင့်တဲ့အတွက် စတင်အရေးယူ ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို အပြင်းအထန် နာကျင်စေမှု၊ တားဆီး ပိတ်ပင်မှုနဲ့ ဆဲဆိုမှုတို့နဲ့ စွဲဆိုပြီး စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန် ဘုရင့်နောင်တာဝါ ၂ ရှိ လေးလွှာမှာနေတဲ့ ဒေါ်စီစိလျဟာ အိမ်ဖော်မ သီတာဝင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့က မိမိညှပ်တဲ့ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မှာ မညှပ်ဘဲ တခြား ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကို သွားညှပ်တဲ့အတွက် ညှဉ်းပန်းနှိပ် စက်သလို ရေနွေးပူတွေနဲ့ လောင်းခဲ့တာလို့ ကာယကံရှင် မသီတာဝင်းက ပြောပါတယ်။
တရက်တည်းမှာပဲ အဲဒီညနေက အိမ်ရှင်က ပါတီပွဲသွားဖို့ဆိုပြီး မီးပူတိုက်ခိုင်းရာ မီးပူတိုက်တာ မပြန့်ဘူးဆိုပြီး မီးပူနဲ့ ထိုးခဲ့တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
နှိပ်စက်ပြီးနောက် အခန်းတွင်း သော့ပိတ်လှောင်ပိတ်ထားသလို အရောင်ပျောက်ဆေး ပေးပြီး မိမိဘာသာကုသခိုင်းပြီး မကုရင် မသင့်တော်တဲ့ နေရာတခုကို ပို့မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
အနာသက်သာပြီးနောက် မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာတော့ အ၀တ်လျှော်ဖို့ ဆပ်ပြာသွား ၀ယ်ခိုင်းတဲ့အတွက် သမိုင်းမှာနေတဲ့ အစ်မ ၀မ်းကွဲတဦးဆီ ထွက်ပြေးခဲ့ပြီး ရဲစခန်းကို တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/21/20140အကြံပြုခြင်း
နေအိမ်ရှိ တစ်လုံးတည်းသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းမြည်လာချိန်တွင် ဦးနေမင်းတစ်ယောက် အလွန်သတိဝီရိယကြီးစွာဖြင့် ဖုန်းကိုင်လိုက်သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ ဒါကာမြို့တွင် အခြေစိုက်သည့် သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သတင်းထောက်ဟု ထင်လိုက်သော်လည်း တစ်ဖက်မှ ‘‘BBC သတင်းထောက်လား’’ဆိုသော အသံကြောင့် တအံ့တသြဖြစ်သွားချိန်တွင် တစ်ဖက်က ဆက်လက်၍ ‘‘ကျွန်တော် မိုက်ကယ်အဲရစ်ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စကားပြောချင်လို့’’ဟု ပြောလာပါသည်။ မကြာမီ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏အသံကို ဖုန်းလိုင်းထဲတွင် ကြားလိုက်ရသည်။
အချိန်က စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင် ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းဖြစ်သည်။
‘‘ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီး လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေ ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာလုပ်မယ်လို့ ပြောဆိုလှုံ့ဆော်နေတဲ့ သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိတဲ့အကြောင်း BBC ကတစ်ဆင့် ရှင်းပေးပါလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် မေတ္တာရပ်ခံတဲ့သတင်းကို ကျွန်တော် လက်ခံရရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီသတင်းကို BBC က တစ်ဆင့်ပြန်လွှင့်ပေးခဲ့တယ်’’
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၎င်း၏ခင်ပွန်း မိုက်ကယ်အဲရစ်တို့ကဲ့သို့ပင် သပိတ်စခန်းများစွာ၊ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများစွာက ဦးနေမင်းထံသို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သတင်းပေးသည့် ဖုန်းများကို ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံကာလတစ်လျှောက် လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး တစ်လအကြာ အထိန်းသိမ်းမခံမီအထိ ဦးနေမင်းသည် BBC သတင်းထောက် ခရစ္စတိုဖာဂါးနက်ထံ ဆက်သွယ်၍ သတင်းများ ဆက်တိုက်ပေးပို့ခဲ့သည်။
၈၈ အရေးတော်ပုံတစ်လျှောက် မြန်မာ့အရေးနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများကို BBC သတင်းဌာနမှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ ပျံ့နှံစေခဲ့သည်မှာ ဦးနေမင်းပိုင်ဆိုင်သော တစ်လုံးတည်းသော ကြိုးဖုန်းလေးမှဖြစ်သည်။ တယ်လီဖုန်းလိုင်းများကို ထောက်လှမ်းရေးများ ကြားဖြတ်နားထောင်နေသည့်ကြားမှ မြန်မာ့အရေး နောက်ဆုံးသတင်းများကို BBC သတင်းဌာနက အမြဲလိုလို ထုတ်လွှင့်နေနိုင်ခဲ့ခြင်းကို ထောက်လှမ်းရေးများကိုယ်တိုင် မယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။
‘‘ပြည်ပက တိုက်ရိုက်ဆက်တဲ့ဖုန်းဆို ကြားက အော်ပရေတာမခံလည်း ခေါ်လို့ရတယ်။ ခရစ္စနဲ့ ကျွန်တော်က အဲဒီလမ်းကြောင်းကို သုံးခဲ့တာ။ ခရစ္စက တစ်နေ့လေးကြိမ်ပုံမှန်ခေါ်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ခေါ်လို့မရဘူး။ ခေါ်ရင် အော်ပရေတာခံရတော့ ကြားဖြတ်နားထောင်မှာပဲ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ BBC အတွက် သတင်းတွေ အများကြီးလုပ်ပေးခဲ့တယ်’’ဟု အသက်(၆၇)နှစ်ရှိ ဦးနေမင်းကပြောပြသည်။
တရားမမှုများ သီးသန့်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သည့် ရှေ့နေဦးနေမင်းသည် အမှုသည်တစ်ဦးကြောင့် BBC သတင်းထောက် ခရစ္စနှင့် ချိတ်ဆက်မိသည်။ ၁၉၈၈
မတ်လတွင် စက်မှုကျောင်းသား ကိုဖုန်းမော်၊ ကိုစိုးနိုင်တို့ သေဆုံးခဲ့ခြင်း၊ ကျောင်းသားများစွာထိန်းသိမ်းခံရခြင်း၊ လူထုဆန္ဒပြပွဲများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း စသည့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကို လေ့လာရန် ခရစ္စမှာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သုံးပတ်ကြာ လာရောက်ခွင့်ရချိန်တွင် မြန်မာအစိုးရ အတိုက်အခံအင်အားစုများနှင့် တွေ့ဆုံရန် ကြိုးစားရာတွင် ဦးနေမင်းလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
‘‘၈၈ ဧပြီမှာ ရဲကားမီးရှို့မှုနဲ့ အဖမ်းခံရတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်အမှုကို လိုက်ရင်းနဲ့ အစိုးရရဲ့ဥပဒေကို လိုသလိုအသုံးချတာတွေ၊ မတရားတာတွေ သိလာတော့ ဦးနေ၀င်းအထိကိုတက်ပြီး တရားစွဲခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့တဲ့အမှုတွေက နိုင်ငံရေးသမားတချို့ ရှစ်လေးလုံးမတိုင်မီလွတ်ကုန်ကြတော့ ကျွန်တော့်အမှုသည်ကတစ်ဆင့် ခရစ္စက ကျွန်တော့်ဆီ ပထမဆုံးဆက်သွယ်လာခဲ့တယ်’’ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့် BBC သတင်းများ ကွက်တိမှန်ကန်မှုကြောင့် ခရစ္စတိုဖာဂါးနက်ကို CIA ဟုပင် ထင်မှတ်ခဲ့ကြပြီး ထိုအချိန်က BBCနှင့် ခရစ္စတိုဖာဂါးနက်သည် သူရဲကောင်းသဖွယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အမှန်တော့ ခရစ္စကို အစိုးရက ပြည်ဝင်ခွင့်မပေးတော့သဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ ဒါကာမြို့တွင် အခြေစိုက်ကာ ဦးနေမင်း၏ သတင်းပေးပို့ချက်များကို ပုံမှန်ရယူရင်း မြန်မာ့အရေးသတင်းများကို BBC က လွှင့်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
‘‘၈၈ မှာ မြန်မာပြည်က ဂျာနယ်လစ်တွေအားလုံးကို အစိုးရကဖိနှိပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ ဦးနေမင်းဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဓိကသတင်းရင်းမြစ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ သူက သတင်းတွေစုစည်းပြီး ကျွန်တော့်ဆီပို့တယ်။ ကျွန်တော်က BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာ ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်။ ဒီမတိုင်ခင်အထိ ဦးနေမင်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာ အသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံခဲ့ရဘူး။ သူ့ရဲ့စူးရှတဲ့အမြင်နဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိကို ကျွန်တော်တို့ ပြန်ပြီးဂုဏ်ပြုသင့်ပါတယ်’’ဟု သတင်းထောက် ခရစ္စတိုဖာဂါးနက်က အီးမေးလ်မှ တစ်ဆင့်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ယင်းကြောင့်လည်း ၈၈ အရေးတော်ပုံတစ်လျှောက် သတင်းများကို စွန့်စားပေးပို့ခဲ့သူ ဦးနေမင်းကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုလ ၁၀ ရက်က စတင်ကျင်းပခဲ့သည့် East West စင်တာ မီဒီယာညီလာခံက ရဲစွမ်းသတ္တိဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
ဦးနေမင်း ပေးပို့သော သတင်းတိုင်းကို ခရစ္စကလည်း ဒီတိုင်းတော့ တန်းသုံးခြင်းမဟုတ်။ ထိုစဉ်က မြန်မာပြည်ရှိ သံရုံးအသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် အခြားသော သတင်းရင်းမြစ်များထံ မေးမြန်းအတည်ပြုပြီးမှသုံးကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
‘‘ဦးနေမင်းက ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သူရဲကောင်းပါ။ ကျွန်တော်ဟာ အဲဒီတုန်းက အသက်ကငယ်သေးတယ်။ အလုပ်ကို ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ခဲ့ပေမယ့် သူ့လောက်တော့ အနစ်နာမခံခဲ့ရဘူး။ ပေးဆပ်မှုလည်း မကြီးမားခဲ့ဘူး။ သူကမှ ၈၈မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ သူရဲကောင်းတွေထဲက တစ်ယောက်ပဲ’’ဟု ခရစ္စကဆိုသည်။
ပင်လုံစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက် ၁၉၄၇ တွင် မွေးဖွားခဲ့သော ဦးနေမင်းသည် ဖဆပလခေတ်၊ မဆလခေတ်၊ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ် မျိုးစုံဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ၎င်း၏ခေါင်းမာမှုနှင့် ပညာမာနကြီးမှုတို့ကြောင့် အစိုးရ၀န်ထမ်းအလုပ်နှင့် အဆင်မပြေ။ ပထ၀ီနှင့်ကျောင်းအပြီး ဆေးသုတေသနဌာနတွင် ခေတ္တအလုပ်ဝင်ချိန်၊ တစ်ဖက်တွင် ဥပဒေဒီပလိုမာရယူခဲ့ပြီး ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးတွင် ပညာရှင်ရာထူးဖြင့် အလုပ်စ၀င်ခဲ့သည်။
ကညနတွင်လည်း အထက်အရာရှိနှင့် အဆင်မပြေသောကြောင့် အလုပ်မှနုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး လက်ဦးဆရာ၏ အကြံပေးမှုဖြင့် တရားမမှုများ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရင်း ရှေ့နေဖြစ်လာခဲ့သည်။
သတင်းထောက်အတွေ့အကြုံမရှိသော်လည်း အစိုးရအဆက်ဆက် မတရားမှုများကို လက်မခံလိုစိတ်နှင့် ၀ါဒဖြန့်ချိသည့်သတင်းများနှင့်သာ နီးစပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ခရစ္စထံ သတင်းများပေးပို့ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
‘‘သတင်းပညာနောက်ခံလည်း ဘာမှမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအဆက်ဆက် အတွေ့အကြုံအရ ဘယ်နေ့မှာ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြိုတင်တွက်ချက်ပြီး သတင်းတွေ ပို့နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီအတွက်လည်း BBC က တစ်ပြားတစ်ချပ်မှမရခဲ့သလို တောင်းလည်းမတောင်းဆိုခဲ့ဘူး’’
အလှမ်းကျယ်သည့် ထောက်လှမ်းရေးကွန်ရက်အတွင်း ဦးနေမင်းလည်း နောက်ဆုံးတွင် သက်ဆင်းခဲ့ရသည်။ ၁၉၈၈ အောက်တိုဘာ၂၁ တွင် ထိန်းသိမ်းခံရပြီး ပုဒ်မ ၅(ည)ဖြင့် ထောင် ၁၄ နှစ် ကျခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး အေးချမ်းစွာနေထိုင်ခဲ့ရာမှ ၂၀၀၃ တွင် ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ ကျောင်းသားအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့တည်ထောင်သော Network Media Group အတွက် သတင်းအတွေ့အကြုံ၊ အကြံဉာဏ်ပေးမိသဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ၅ (ည)၊ မတရားအသင်းဆက်သွယ်မှု၊ မတရားအသင်းဝင်မှု ၁၇ (၁) (၂)တို့ဖြင့် ထောင် ၁၅ နှစ်ကျခံခဲ့ရပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။
‘‘ပထမတစ်ကြိမ်ထောင်ကျတော့ သာယာဝတီထောင်ကို အစ်မငယ်နဲ့ အစ်မကြီးတို့ ထောင်ဝင်စာလာတွေ့ပြီး အပြန်မှာ ကားမှောက်ပြီး အစ်မငယ်က ပွဲချင်းပြီးဆုံးသွားတယ်။ အစ်မကြီးကတော့ နံရိုးတွေကျိုးကုန်တယ်။ အစ်မငယ်ဆုံးတာကို မိသားစုက ဖုံးထားတယ်။ အပြင်ရောက်မှ သိရတာ။ အိမ်ကမိသားစုက နိုင်ငံရေးကို လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့တော့လို့ တားတယ်’’ဟု နံရံတွင်ချိတ်ထားသော ဘွဲ့ဝတ်စုံဖြင့် အစ်မငယ်ဓာတ်ပုံကိုညွှန်ပြရင်း ၀မ်းနည်းနှမြောဟန်ဖြင့် ပြောသည်။
ပထမတစ်ကြိမ်ထောင်ကျကတည်းက ရှေ့နေလိုင်စင် ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရပြီး ဘ၀ရပ်တည်ရေးအတွက် မိသားစုဝင်များကိုသာ အားကိုးရပ်တည်ခဲ့ရသည်။ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်း လုံးဝမထောက်ခံသဖြင့် ယင်းဖွဲ့စည်းပုံအောက်က ဥပဒေများကို အသုံးပြုအမှုမလိုက်ချင်သဖြင့် ယနေ့အထိ ရှေ့နေလိုင်စင်ကို ပြန်လည်မထုတ်သေးဟုဆိုသည်။
၂၀၁၁ တွင် လွတ်မြောက်ပြီး နောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးနှင့် သတင်းလောကကို စွန့်လွှတ်ထားပြီး တရားစခန်းရိပ်သာများတွင်သာ ပျော်မွေ့နေပြီဖြစ်သည့် တစ်ကိုယ်တည်း လူပျိုကြီးသမား ဦးနေမင်းက လက်ရှိသတင်းထောက်များကို သူဖြတ်သန်းခဲ့သည့် သတင်းလောကနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ အကြံပြုသည်။
‘‘ထောက်လှမ်းရေးအော်ပရေတာ ကြားခံထားတဲ့ကြားက၊ ထောင်ကျမယ် အသေခံရမယ်ဆိုတာ သိတဲ့ကြားက အော်တိုတယ်လီဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့တောင် ကျွန်တော် လူထုကို သတင်းတွေပေးခဲ့တယ်။ အခုခေတ်မှာ ဟန်းဖုန်းကိုယ်စီနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပေါင်းစုံနဲ့ သတင်းထောက်တွေ အရည်အချင်းသာရှိရင် ပေါ်ပင်လေးတွေ မလုပ်စေချင်ဘူး။ ငါတို့ခေတ်မှာ ငါတို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာ သမိုင်းပဲ’’
ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်အောင် NLD လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ဘူး
Nld Nld Myanmar
လွှတ်တော်ထဲမှာ NLDဘာလုပ်နေလဲ. ဘာတွေလုပ်ပြနိုင်ပြီလဲလို့ ခနဲ့ချင်တဲ့သူတွေသိအောင်ပြောပြမယ်..
ဟုတ်တယ် လွှတ်တော်ထဲမှာ NLD ဘာမှမလုပ်ပါဘူး.
ခုလက်ရှိမီတာခ တိုးကောက်ဖို့ အဆိုလည်း မတင်သွင်းဘူး..
(ကန့်ကွက်ဖို့ ငါးကြိမ်မြောက်ထိရပ်တာတောင် မိုက်မရလို့ ဆွေးနွေးခွင့်မရ)
ပိုင်ဆိုင်မှုကြေငြာဖို့ အဆိုလည်း မကန့်ကွက်ဘူး..
ဘင်္ဂလီ ခိုးဝင် ဝှိုက်ကဒ်ကိုင်တွေ မဲပေးခွင့်ရရေး ပါတီထောင်ခွင့်ရရေးလည်း မထောက်ခံခဲ့ဘူး..
ပြည်သူတွေကြ အခွန်တိုးကောက်ပြီး ခရိုနီတွေရဲ့ သယံဇာတအခွန်ကျ ၅၀%လျှော့ချဖို့လည်း မထောက်ခံခဲ့ဘူး။
ပြည်သူကို ဒုက္ခရောက်စေမယ့် ဘယ်အဆိုမှလည်း မထောက်ခံခဲ့ဘူး...ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာ NLD လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘာမှမလုပ်ဘူး(ပြည်သူဒုက္ခရောက်အောင်)။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/21/2014 1 အကြံပြုခြင်း
ဘဲဥ တစ် ခြမ်း နဲ့ ထမင်း တဆင့်
ကို ရင် သြ
မြေနီကုန်း မီးပွိုင့်မှာ ကားတွေပိတ် နေတုန်း
ဟိုကြည့် ဒီကြည့် ကြည့် လိုက် မိ တော့ "
ကုပ္မဏီ ဝန် ထမ်းလို့ ထင် ရ တဲ့ လူငယ်
တစ် ဦး ဟာ သူ့ရုံးသွားထမင်းချိုင့် ထဲက
တစ်ဝက် ကို " သေချာပြောရ ရင် ...
ဘဲဥ တစ် ခြမ်း နဲ့ ထမင်း တဆင့် " ကို
လမ်းဘေး က အဘွား အို တစ် ယောက် ကို
ခွဲ ပြီး ဒါန ပြု နေ တာ မြင် လိုက် ရ တော့ "
အမှတ် တမဲ့ ဓာတ်ပုံ ရိုက် ထား လိုက် တာပါ။
( ရင် ထဲ တမျိုးကြီးပါ ဗျာ ) "
မောင်ကိုကိုကြီးနှင့် မခင်သူသူဝင်းတို့ဧ။် မင်္ဂလာ ဧည့်ခံပွဲ
အိမ်ဖော်ကို ရက်စက်စွာနှိပ်စက်သည့် အိမ်ရှင် ဖမ်းဆီး...
ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်အောင် NLD လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘာမှ မလ...
မောင်ကိုကိုကြီးနှင့် မခင်သူသူဝင်းတို့ဧ။် မင်္ဂလာ ဧည်...